यौनको बजार नभएको होइन । तर, यो नै सम्पूर्ण होइन - Malayakhabar
होम पेज अन्तर्वार्ता यौनको बजार नभएको होइन । तर, यो नै सम्पूर्ण होइन
यौनको बजार नभएको होइन । तर, यो नै सम्पूर्ण होइन
आफ्नै केही व्यक्तिगत काम । केही सामाजिक काम । फेरि कोरोना कहर छ यससँग सचेत हुँदै आफ्ना दैनिक कर्महरूमा जुटिरहेको छु ।
पछिल्लो समय पढेको पुस्तक ?
वरिष्ठ नियात्राकार युवराज नयाँघरेको ‘तनखा’ ।
मनपर्ने साहित्यकार ?
यही नै भन्नु भन्दा पनि सबै नै मनपर्छ । खास गरेर प्रजातन्त्र, सुशासन, मानवाधिकार, राष्ट्रियता र जनताका पक्षमा लेख्ने लेखकहरू मन पर्छन् ।
बाँचुजेलको चोला हो । सतकर्म गरे मान्छे युगयुग आफ्नो नामले बाच्छ । बुद्धले जस्तो, अरनीकोले जस्तो, योगमायाले जस्तो । जीवनको महत्व बुझ्नु जरुरी छ । जीवन खुसी र सुखी भएर बाच्न सक्यो भने मात्र जीवनको सही परिभाषा पाउन सकिन्छ ।
राधेश्याम लेकाली को हो ?
एउटा साधारण व्यक्ति जो सधैं संघर्षमा विश्वास गर्छ, जो सधै परिश्रम गर्छ र अरुको भलोको लागि सोच्ने गर्छ । यही परिभाषाको वकालत गर्दै शब्दहरुको माला बनाएर साहित्यमा कलम चलाउँछ ।
तपाईं कसका लागि लेख्नुहुन्छ ?
स्वतन्त्रताको लागि, राष्ट्रियताको लागि र उन्मुक्तिको लागि लेख्छु ।
राम्रो गीत, राम्री युवती र राम्रो रक्सीमध्ये कुनलाई रोज्नु हुन्छ ?
बिहे नगरेको भए मेरो जवाफ दोस्रो राम्री युवती हुन्थ्यो । अब त्यो भएन । यस कारण गीत नै रोज्छु । रक्सी त मेरो नियमित सेवनमा पर्दैन । मौसमी मात्र हो ।
एकथरि मानिस साहित्यमा यौन चाहिन्छ भन्छन्, अर्काथरि यौन बर्जित छ भन्छन् । यहाँको विचारमा ?
यौनको बजार नभएको होइन । तर, यो नै सम्पूर्ण होइन । यतिबेला देश छाम्नुपर्छ कलम चलाउनेहरूले । विद्यमान बिकृति र विसंगतिउपर शब्दको प्रहार गर्नुपर्छ । देश अधोगतिमा गएको छ, नेतृत्वबर्गको लूट्पाट हेरेर साद्य छैन । यस्तो अवस्थामा यौन साहित्य लेख्ने कि युद्धको ? प्रश्न उठ्छ नी
कस्तो साहित्यले समाजको परिवर्तन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ ?
समाजको आमुल परिवर्तनको लागि अबको साहित्य यथार्थपरक हुनुपर्छ । विद्रोही साहित्य लेख्नु पर्छ । साहित्य लेख्दा विल्कुलै प्रतिपक्ष भएर लेख्नु पर्छ ।
नेपाली लेखक र पाठकप्रति कुनै सुझाव ?
जस्तो पायो त्यस्तो कृति प्रकाशन गर्नुभन्दा उत्कृष्ट कृति प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसका लागि लेखनको विषयबस्तुको चयनलगायतमा ध्यान पु¥याउनु पर्छ । प्रकाशन अघि सम्पादन गर्नेजस्ता कुरा गर्न सके राम्रो हुन्छ । हतारमा लेख्ने, हतारमा प्रकाशन गर्ने, हतारमा प्रचारप्रसार गराउने र हतारमा पुरस्कारको लागि दौडधुप गर्ने हाम्रो बानी छ । रह्यो आदरणीय पाठकलाई सुझाव अहिलेका पाठकबर्ग आफँै जानकार र सचेत हुनुहुन्छ ।
प्रस्तुति – कृष्ण भुसाल
अघिल्लो लेख धार्मिक, आर्थिक र पर्यटकीय महत्वले आकर्षक गन्तव्य गलेश्वर सुनसान
पछिल्लो लेख बाल कथा:जातको कुरा
कोरोना विरुद्धको फाइजरको भ्याक्सिन लगाएपछि २९ जनाको मृत्यु, भ्याक्सिन प्रश्नको घेरामा।
विश्वको दोश्रो अग्लो हिमालमा पहिलो पाइला नेपालीले टेके, रचियाे विश्व इतिहास।
कोरोनाको बीच “साउथ ईन्डियन” फिल्मको बक्स अफिसमा तुफान, नेपालमा पनि रिलिज।
मलाया खबर न्युज डेस्क - January 17, 2021
एजेन्सी := नर्वेमा फाइजरको भ्याक्सिन लगाएपछि मृत्यु हुनेको संख्या २९ पुगेको छ । यससँगै सरकारको चिन्ता बढेको छ भने भ्याक्सिनमाथि समेत गम्भीर...
एजेन्सी:= १० जना नेपालीको पर्वताराेही टीमले इतिहास रचेका छन् । पाकिस्तानमा रहेको विश्वको दोश्रो सबैभन्दा अग्लो हिमाल केटु आरोहण गरेर उनीहरुले विश्व...
काठमाडौं:= कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभरी फिल्म उद्योग लामो समय ठप्प रहे । यही बीचमा रिलिज भएको दक्षिण भारतीय फिल्म मास्टरले बक्स अफिसमा तुफान...
कलैया अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित,माग पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय लाई ध्यानाकर्षण।
बारा := कलैया अस्पताल का कर्मचारीहरुले आफ्नो कोरोना भत्ता नपाएको भन्दै बिगत पाँच दिन देखि आन्दोलन मा छन् । अस्पताल को सबै...
मलेसियामा आज एकैदिन मात्रै ४ हजार भन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला, ८ जनाको मृत्यु।
क्वालालम्पुर ( मलेसिया ):= मलेसियामा कोरोना भाइरस ( कोभिड-१९ ) ले संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ५५ हजार...